Ama-Akhawunti Wamahhala weNetflix namaPhasiwedi | Disemba 2020 (Izindlela Zokusebenza) - Ezokuzijabulisa
Ama-Akhawunti we-Netflix Mahhala 2020 | Izindlela ezihamba phambili zokuthola
INetflix yiwebhusayithi enkulu yokuzijabulisa kwi-inthanethi. Banomtapo omkhulu wemibukiso nama-movie atholakala ngokufunwa. Abasebenzisi bangasakaza ngekhwalithi ye-UHD ngokubhaliselwe kwabo. Isidingo sokuzijabulisa ngewebhu sikhuphukile ezinyangeni ezimbalwa ezedlule. U-2020 unyaka lapho wonke umuntu eqale ngokunganqikazi ukukhokhela okubhaliselwe kwedijithali nge-cable TV.
Kukhona ukukhishwa okuvamile endaweni yesikhulumi, futhi kunokuthile kwawo wonke umuntu. Kulo mhlahlandlela, silangazelela ukukunikeza ama-akhawunti wamahhala weNetflix. Thola umthamo wakho wansuku zonke wokuzijabulisa ngeNetflix bese uqala ukusakaza namuhla!
Kunezindlela eziningi zokubuka imibukiso mahhala. INetflix, kepha ikubiza cishe u- $ 10 ngenyanga. Kungaba yinselele ukuthola i-akhawunti mahhala, kepha akunakwenzeka.
Izindlela zokuthola ama-Akhawunti wamahhala weNetflix:
Izindlela ezibalwe kusayithi ziyi-100% yangempela, ngakho-ke akudingeki ukhathazeke nganoma yini. Ubumfihlo bakho buzobe bungaphelele, futhi ungangena kwi-Akhawunti yeNetflix ne-password yamahhala ukubukela ama-movie nemibukiso yakho oyithandayo.
1. Thola Isilingo Samahhala se-Netflix:
Ukuvuselelwa - Akusekho UkulingwaNgokuya kweNews & PR, iNetflix ayisanikezi izivivinyo zamahhala e-US. Ungakwazilandela izindlela ezingezansi ezishiwoukufinyelela mahhala.
Le kuyindlela engu-100% esebenzayo nephephile yokusebenzisa i-Netflix mahhala cishe izinsuku ezingama-30 ngaphandle kokuchitha iphenathi. Okufanele ukwenze ukuya kuNetflix.com, bese ubhalisa ngokwakha i-akhawunti entsha. Manje khetha isilingo senyanga yamahhala , futhi uzothola ukufinyelela kokuqukethwe mahhala.
Sakaza okuningi ngendlela othanda ngayo futhi ngekhwalithi ye-HD. Kodwa-ke, kufanele ukhansele okubhalisile ngaphambi kokuphela kwesikhathi sesilingo. Qiniseka ukuthi ukhansela okubhaliselwe, futhi ngeke ukhokhiswe lutho. Uma isikhathi sidlula ngisho nosuku olulodwa ngemuva kwecala, uzokhokhiselwa izinsizakalo.
Le yindlela yokusebenza ehambisana nobungozi. Indlela engcono ukusetha isikhumbuzi ku-smartphone yakho mayelana nokukhansela okubhaliselwe uma ungafuni ukukhokhiswa.
2.Sebenzisa Amakhadi Abonakalayo:
Ngakho-ke usuvele usebenzise ikhadi lakho lesikweletu ukuthola isivivinyo samahhala? Ungakhathazeki; sinesixazululo salokhu futhi. Ungakha amakhadi we-virtual ukufinyelela ama-akhawunti we-Netflix. Inqubo izofana nokuthi kufanele ukhethe isilingo samahhala sanyanga zonke.
Ukuze uthole ikhadi lesikweletu elibonakalayo, udinga ikhadi lesikweletu elivumelekile elisebenzayo. Ungasebenzisi amaqhinga mbumbulu njengoba kungakufaka enkingeni, nephupho lakho lokubuka ama-movie akho owathandayo lingashabalala.
3. Sebenzisa amakhukhi weNetflix
Indlela yamakhukhi yeNetflix iya ngokuya ithandwa kakhulu njengoba abantu bethanda ukuyisebenzisa. Uma ungafuni ubunzima bokusebenzisa amakhadi, bese ukufaka isandiso kusiphequluli kuzosiza. Awudingi ukubeka imininingwane yakho yasebhange ngenkathi usebenzisa amakhukhi, ngakho-ke indlela iphephile futhi kulula ukuyisebenzisa.
4. Yabelana nge-Akhawunti Yomngane Wakho
Ngakho-ke umngani wakho une-akhawunti esebenzayo yeNetflix? Kungani ungahlanganyeli nalo ukuze uthole ikhofi ngokushintshanisa. Ezinye izinhlelo zeNetflix zivumela abasebenzisi ukuthi bafinyelele okuqukethwe kuzikrini eziningi. Nobabili ningakujabulela ukubukela izinhlelo ezihlukene ngasikhathi sinye ngaphandle kwenkinga.
5. Ukubhaliswa kwamahhala ngamanethiwekhi weselula:
Uma uhlela ukushintsha inethiwekhi yeselula, ngakho-ke yisikhathi esifanele sokuya kumuntu okhokhela i-akhawunti yakho yeNetflix. I-T-Mobile yethule uhlelo lapho ungasebenzisa khona izinsizakalo zazo ngenkathi usebenzisa i-akhawunti yeNetflix mahhala noma ngemali encane.
Iphakethe elinikezwe yiT-Mobile laziwa ngeNetflix On Us. Chofoza lapha ukubheka ukuthi ukulungele yini ukuthola uhlelo noma ukuthi ubhalisela kanjani amasevisi we-T-Mobile.
Ezinye Izindlela Uma Zonke Izindlela Ezishiwo Ngenhla kungeyona Inketho Kuwe:
Izindlela ezibalwe ngezansi zizodinga isikhathi sokwakha amakhadi ezipho namavawusha anele ukuthola i-Netflix mahhala. Kufanele ubeke isikhathi uma ungafuni ukukhokhela i-akhawunti ye-Netflix.
1. Imivuzo Yombono weGoogle
I-Google ingenye yemikhiqizo ethandwa kakhulu online. Banobukhona obukhulu online futhi baxhumana nabakhangisi abaningi. Umbono wabo uvuza uhlelo lokusebenza lusiza abasebenzisi ukuthi bathole imali. Phendula imibuzo embalwa ngokugcwalisa ucwaningo. Ungathola imivuzo lapho wenza inhlolovo yakamuva.
Abasebenzisi be-iPhone badlulisela imivuzo yabo kuma-akhawunti abo we-PayPal. Uma usufinyelele umkhawulo othile wokukhokha, inani licutshungulwa ngokuzenzekelayo.
Izigidi eziku-inthanethi zithanda imisebenzi yazo futhi ziyisebenzisa nsuku zonke. Ngemuva kokuchitha amahora ambalwa nsuku zonke kuhlelo lokusebenza, ungaqoqa imali yokubhaliselwe kwakho kwe-Netflix. Kuyindlela esemthethweni futhi esebenzayo engu-100% yabasebenzisi be-iOS. Abasebenzisi be-Android bangathola inkokhelo yabo kuphela ngokusebenzisa amakhredithi we-google play. Lokhu akulungele ukuthenga iNetflix.
I-Facebook ingenye yezingosi ezinkulu zokuxhumana nabantu kwi-intanethi. Banikela ngokukhokhelwa ukwenza insizakalo yemisebenzi kuma-Smartphones. Unganikela ngokubamba iqhaza kuzinhlolovo, imisebenzi, nemikhiqizo emisha. Lokhu kuvuselelwa njalo, ngakho-ke unezinketho eziningi.
I-Facebook isebenzisa uhlelo lwamaphuzu ukukunikeza izinkokhelo. Lapho usuqoqe amaphuzu ayi-1000, ungakhipha amaqiniso ngemali yangempela. Uhlelo lokusebenza lusekela i-PayPal futhi luhlanganiswe kahle nezinye izindlela zokukhokha. Amaphoyinti ayinkulungwane akunika ama- $ 5 emhlabeni wangempela. Ucwaningo lokuqala lokuphila kahle kuhlelo lokusebenza lufanele imali oyidingayo ekubhaliseni okubalulekile.
Qedela imisebenzi embalwa ngaphezulu kwenyanga ukukhulisa imali yokuvuselelwa kwakho kweNetflix. Kuyindlela enhle yokukhokhelwa ku-inthanethi. Uhlelo lokusebenza luyatholakala kubo bobabili abasebenzisi be-Android ne-iOS.
3.Ibhokisi Lemilayezo Engenayo
I-InboxDollars yisayithi eku-inthanethi elikukhokhelayo ukusebenzisa amasevisi abo. Ungathatha izinhlolovo ezijwayelekile futhi uthole imali yangempela. Ipulatifomu iyindlela enhle yokwenza imali esheshayo. Konke okudingayo ukufinyelela kuxhumano lwe-inthanethi. Abasebenzisi abasha bathola umklomelo wokubhalisa ongu- $ 5 lapho benza i-akhawunti entsha. Ibhonasi ikuthatha kahle endleleni yokuthola i-akhawunti yamahhala.
Qedela izinhlolovo ezimbalwa ukwandisa inani lakho lomvuzo. Isayithi elifinyeleleka kakhulu kubantu abafuna ukuthola imali. Uzothola imali yokubuka i-TV, ukugcwalisa izinhlolovo nokuthenga online. Kukhona amadili okubuyisa imali wakho wokuthenga nge-inthanethi.
Kunemidlalo eminingi etholakalayo lapha ongazama kuyo. Lokhu futhi kukhokha kakhulu futhi kuzokwengeza kubhalansi yakho yomvuzo. Ukufunda ama-imeyili nakho kunomvuzo kubasebenzisi.
AmaSwagbucks kungenye indlela enhle yokuthi abasebenzisi bathole imali online. Isayithi lisebenza kumgomo ofanayo newebhusayithi ye-InboxDollars. Lapha ungaqoqa amaphuzu noma ama-SB ukwengeza imivuzo yakho. Uma usu-ode inani elithile, i-premium yakho iyatholakala ngenkokhelo. Kunezinketho eziningi zokukhokha, kufaka phakathi i-Paypal namakhadi wesipho. I-Swagbucks isekela i-amazon, ukuthenga okungcono kakhulu, nezinye izitolo eziningi.
Izitshudeni emhlabeni wonke ziyayithanda le ndawo ngamakhono ayo okuhola. Izingosi zezindaba ezidumile ezifana neBuzzfeed neHuffington Post zikubize ngokuthi yindlela enhle yokonga imali. Abasebenzisi bavuzwa ngokusebenzisa izinsizakalo ezibalulekile kusayithi labo. Kukukhokhela ukuthi udlulise amehlo ku-intanethi futhi wenze usesho. Kukhona izinhlolovo ezijwayelekile, futhi udonga lokunikezwa lungeza imisebenzi yansuku zonke. Kancane kancane ungazuza amaphuzu anele ukuze uzithengele okubhaliselwe kwe-akhawunti ye-Netflix.
Umakhi we-Akhawunti yeNetflix:
Lokhu kungenzeka kudonse amehlo akho njengoba iningi lethu lifuna ukusebenzisa iNetflix mahhala ngaphandle kwemizamo. Kepha ukusebenzisa la ma-generator kuzoba yinto embi kakhulu ongayenza. Lawa ngamathuluzi mbumbulu aqoqa imininingwane yakho eyigugu futhi awathengise kuwebhu emnyama.
Ungasebenzisi ama-generator ngoba ngeke uthole i-akhawunti mahhala futhi ukuphepha kwakho kusengozini. Awekho ama-hacks noma ama-tweaks azokwenza lokhu kwenzeke. Sincoma ukuthi uhlale kude nalezi zingosi futhi uzigcine uphephile. Uzozithola zigcwele kuyo yonke iGoogle, kepha lawa amasayithi ayingozi ongawasebenzisa.
Izinzuzo Zokulandela Izeluleko Ezikuhlu Kule Ndatshana:
Kunezinzuzo eziningi ozozithola ngalezi zeluleko ngaphandle kokuthola i-akhawunti ne-password yamahhala yeNetflix.
1. Ukuphepha okungahambisani nalutho
Ukusebenzisa lezi zeluleko kuqinisekisa ukuphepha okungahambisani nalutho, futhi akudingeki ukhathazeke ngokuphulwa kwezokuphepha. Zonke izeluleko ezibhalwe lapha ziphephile ukusebenzisa.
2. Yonga imali
Ungonga imali eningi ngokuthola i-akhawunti ye-Netflix mahhala. Manje asikho isidingo sokuchitha imali uthenga i-akhawunti.
3. Easy ukusebenzisa
Izindlela namathiphu abhalwe lapha kulula ukuwasebenzisa ukuze uthole i-akhawunti yamahhala ye-Netflix ngokushesha.
INetflix iyipulatifomu enhle kakhulu yokusakaza amavidiyo online. Yindawo enhle yokuzijabulisa online kulezi zinsuku. Ungathola okuqukethwe kwekhwalithi ngaphandle kwezinkinga nhlobo. Siyethemba lo mhlahlandlela ukwazile ukukunikeza imininingwane eyanele mayelana nokuthola i-akhawunti yamahhala ye-Netflix. Zama izinyathelo bese uthola ukuthi ziyazisebenza yini!
likuphi ikhasi lokususa i-akhawunti ku-instagram
ungayithola kanjani itunes ku-pc
bukela ama-movie mahhala ku-inthanethi angavinjelwe
ngingadlala kuphi i-roblox
ungadlula kanjani kwi-youtube block
ungawathola kanjani ama-movie wamahhala ku-google